(၂)မိနစ်သာကွာတဲ့ အမြွှာလေးတွေဖြစ်ပေမယ့် တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီ အကျင့်စရိုက်ရှိတဲ့ ခေတ်နဲ့သစ်အကြောင်း ဓာတ်ပုံလေးနဲ့တကွ ပြသလာတဲ့ ချစ်သုဝေ – Askstyle
(၂)မိနစ်သာကွာတဲ့ အမြွှာလေးတွေဖြစ်ပေမယ့် တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီ အကျင့်စရိုက်ရှိတဲ့ ခေတ်နဲ့သစ်အကြောင်း ဓာတ်ပုံလေးနဲ့တကွ ပြသလာတဲ့ ချစ်သုဝေ
ျပည္သူခ်စ္ အနုပညာရွင္နွစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ခ်စ္သုေဝနဲ့ လင္းလင္းတို့ကေတာ့ စိတ္တူကိုယ္တူနဲ့ သာယာေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ မိသားစုဘဝေလးကို တည္ေဆာက္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်စ္သုေဝရဲ့ သမီးေလး နွစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ေခတ္နဲ့သစ္ကလည္း အရုပ္ေလးေတြလိုခ်စ္စရာေကာင္းျပီး စကားလည္း အရမ္းတတ္တာေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြက သည္းသည္းလႈပ္ခ်စ္ရတဲ့ ကေလးေလးေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန့မွာေတာ့ ခ်စ္သုေဝက (၂)မိနစ္သာကြာတဲ့ အျမႊာေလးေတြျဖစ္ေပမယ့္ တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳးစီ အက်င့္စရိုက္ရိွတဲ့ ေခတ္နဲ့သစ္အေၾကာင္းကို ေျပာလာပါတယ္။
ခ်စ္သုေဝက “သစ္ေလး ရယ္ ေခတ္ေလးရယ္…ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ရင္လား??? တစ္ေယာက္က ‘ ေမေမ႐ိုက္ေပးပါရေစေနာ္ အမွတ္တရေလးပါ ငယ္ေလးရယ္ ေနာ္ plzzzzz’ လို႔ေျပာရေပမယ့္ ေနာက္တစ္ေယာက္မွာေတာ့.. ‘ ေမေမ ႐ိုက္ဉီး.. ေနာက္တစ္ပုံ’ ဟုဆိုကာ ေတာ္ပါၿပီသမီးရယ္ ရၿပီေနာ္ဟု တားယူရသည္အထိ actingမ်ိဳးစုံ လုပ္ေသာ တစ္ေယာက္ပါရွင္” ဆိုျပီး ဓာတ္ပံုရိုက္ရတာမၾကိဳက္တဲ့ သစ္ေလးနဲ့ ဓာတ္ပံုရို္က္ရတာ ဝါသနာပါျပီး ပို့စ္ေတြအမ်ိဳးမ်ိဳးေပးတတ္တဲ့ ေခတ္ေလးရဲ့ ဓာတ္ပံုေလးေတြကို ခ်ျပလာခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေခတ္ေလးနဲ့ သစ္ေလးကေတာ့ မိနစ္ပိုင္းေလာက္သာကြာတဲ့ အျမႊာမိန္းကေလးေတြျဖစ္ေပမယ့္ တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳးစီ အၾကိဳက္ စရိုက္စီ ကြဲတတ္တာ အျမႊာေလးေတြရဲ့ သေဘာသဘာဝပဲ ျဖစ္မယ္ ထင္ပါတယ္ေနာ္။ ပရိသတ္ၾကီးလည္း တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳးစီ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ေခတ္ေလးနဲ့ သစ္ေလးရဲ့ ပံုရိပ္ေလးကိုၾကည့္ျပီး သေဘာက်ေနၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။ ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ Cele Connections ပရိသတ္ႀကီးအားလုံးလည္း သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။
ပြည်သူချစ် အနုပညာရှင်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ချစ်သုဝေနဲ့ လင်းလင်းတို့ကတော့ စိတ်တူကိုယ်တူနဲ့ သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို တည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သုဝေရဲ့ သမီးလေး နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ခေတ်နဲ့သစ်ကလည်း အရုပ်လေးတွေလိုချစ်စရာကောင်းပြီး စကားလည်း အရမ်းတတ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေက သည်းသည်းလှုပ်ချစ်ရတဲ့ ကလေးလေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ ချစ်သုဝေက (၂)မိနစ်သာကွာတဲ့ အမြွှာလေးတွေဖြစ်ပေမယ့် တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီ အကျင့်စရိုက်ရှိတဲ့ ခေတ်နဲ့သစ်အကြောင်းကို ပြောလာပါတယ်။
ချစ်သုဝေက “သစ်လေး ရယ် ခေတ်လေးရယ်…ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်လား??? တစ်ယောက်က ‘ မေမေရိုက်ပေးပါရစေနော် အမှတ်တရလေးပါ ငယ်လေးရယ် နော် plzzzzz’ လို့ပြောရပေမယ့် နောက်တစ်ယောက်မှာတော့.. ‘ မေမေ ရိုက်ဉီး.. နောက်တစ်ပုံ’ ဟုဆိုကာ တော်ပါပြီသမီးရယ် ရပြီနော်ဟု တားယူရသည်အထိ actingမျိုးစုံ လုပ်သော တစ်ယောက်ပါရှင်” ဆိုပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာမကြိုက်တဲ့ သစ်လေးနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာ ဝါသနာပါပြီး ပို့စ်တွေအမျိုးမျိုးပေးတတ်တဲ့ ခေတ်လေးရဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေကို ချပြလာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ခေတ်လေးနဲ့ သစ်လေးကတော့ မိနစ်ပိုင်းလောက်သာကွာတဲ့ အမြွှာမိန်းကလေးတွေဖြစ်ပေမယ့် တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီ အကြိုက် စရိုက်စီ ကွဲတတ်တာ အမြွှာလေးတွေရဲ့ သဘောသဘာဝပဲ ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ခေတ်လေးနဲ့ သစ်လေးရဲ့ ပုံရိပ်လေးကိုကြည့်ပြီး သဘောကျနေကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။